I-china Box Cartoning machine abahlinzeki kanye nefektri - China Box Cartoning machine abakhiqizi
I-HTH-120G Umshini We-Cartoning Ozenzakalelayo Ogcwele Ngokuzenzakalelayo
I-HTH-120G high speed cartoner ingumshini we-cartoning othomathikhi ngokuphelele ongasebenza ngejubane elikhulu kwimodi eqhubekayo. Lo mshini wokupakisha usebenza ngokuzinza okuphezulu futhi upakisha amabhokisi angama-150 ngomzuzu, okushesha ngokuphindwe ka-2-3 kunababhokisi abajwayelekile. Ukupakisha kuqedwa ngenqubo engaguquguquki, ngenkathi umsindo nomthwalo kuncishisiwe.
Umshini weCartoning usebenzisa ukwakheka okwakhiwe okwesikhashana. Inokuqanjwa okusha okune-compact compact nokufinyelela okulula kwesondlo, okuvumela ama-opharetha ukuthi asondele emishini kalula futhi ahlanzeke noma abuyisele izingxenye. Isakhiwo esimisiwe somshini wonke senza imfucuza iwele kuyunithi lokuqoqa ngezansi, ikwenze kube lula ukugcina kuhlanzekile. Umshini wonke wenziwe ngensimbi engagqwali futhi ufaka isakhiwo sendlela evaliwe kanye negesi. Idivayisi yokushayela itholakala ngemuva futhi ivuleke ngokuphelele ohlangothini lwe-opharetha, oluhlangabezana namazinga we-GMP.
Ubukhulu mm I-5713 × 1350 × 1900 (L × W × H)
Isisindo kg 2000KG
Lokukhipha & Speed
Ijubane lokukhiqiza eliqinile Amabhokisi ayi-120-170 / imin, ancike kumkhiqizo）
Uhlelo lolimi Phakathi kuka (250-450) g ​​/ m2 (ngokobukhulu bayo)
Ibanga losayizi webhokisi (100-250) mm × (60-130) mm × (20-70) mm(Usayizi Special kungenziwa egcizelele)
Ukunikezwa kwamandla okujwayelekile 380V / 50Hz (Kungenziwa yakhelwe ngokuya iklayenti countryelectricity ejwayelekile)
Ukusetshenziswa kwamandla ku-KW 1.5kw
Ukusetshenziswa komoya 20m³ / h
Ukucindezelwa Komoya Okucindezelweyo 0.5-0.8MPa
Umsindo ＜ 80 dB
* I-HTH-120G Cartoner yenza ukupakisha ngemodi eqhubekayo futhi ezenzakalelayo ngokugcwele ngejubane eliphezulu nobuchwepheshe obuphambili.
* ICelton Loader Conveyor Belt ingu-1600mm ubude, isindisa kakhulu isikhathi sokubeka amabhokisi.
* Isembozo senziwe ngensimbi engagqwali engu-304 ngensimbi yokuvikela ingilazi e-aluminium alloy.
* Umshini uhlanganisa isikhombimsebenzisi somshini womuntu ukulungisa zonke izinyathelo kalula. Inemisebenzi yokuqapha izibalo futhi izokhombisa noma yimaphi amaphutha ngenkathi kukhala i-alamu.
* Kusetshenziswa uhlelo lokulandela umkhondo lwe-PLC kanye ne-electro-optical ukuqapha inqubo yokupakisha. Umshini uzokwazisa abasebenzisi ngamaphutha njengalapho imishini iphela emabhokisini noma uma kukhona ukuminyana kwephepha. Lapho izinkinga ezinjalo zivela, i-alamu izokhala ukwazisa opharetha. Inani lemikhiqizo eyenziwe ngophawu luyaboniswa kulolu hlelo.
* Umshini wokupakisha usebenzisa amadivayisi amaningi wokuvikela ukulayishwa ngokweqile athembekile, okwenza umshini ukwazi ukuzivikela futhi ugweme ukulimala ngesikhathi sokusebenza.
* Uma ushintsha izinto, asikho isidingo sokushintsha ezinye izingxenye, zingashintshwa ngqo ngokusebenzisa indlela yokulungisa. Izingxenye zokulungiswa ziboshwe ngezikulufu zokusetha eziguquguqukayo ngesibambo, okulula ukusisebenza futhi okungalungiswa ngaphandle kwamathuluzi.
Ishadi lokugeleza elisebenza ngomshini
Machine Izingxenye Imininingwane
Indawo yokugcina amabhokisi
Idivayisi yokusonga ulimi
Inhloko yesifutho seglue
Ibhande lokukhishwa komkhiqizo
Push induku mshini
Ukuhlelwa kwebhokisi kagesi
I-Reducer ne-Air line
Transmission igiya ibhokisi
Indawo Yomsuka noma Umkhiqizo
Ingxenye #: CPIE-N30DT-D
Imodyuli ye-PLC enwetshiwe
Inkinobho Yokuma Eziphuthumayo
Umshini wokunamathisela oshisayo we-ROBATECH
Ukuze ufunde kabanzi ngemishini yethu nezimboni, iya ku-youtube yethu ukuze ubuke. Ngiyacela Chekc ividiyo yethu yasefekthri: https://youtu.be/ofDv6n86l9U
Langaphambilini I-HTH-120T Machine Yokudla Ngokuzenzakalelayo Ngokugcwele